Degmada Xaradheere oo maanta deggan, iyo dadaallo nabadeed oo halkaasi ka socda. [Akhris …] – Radio Daljir
Degmada Xaradheere oo maanta deggan, iyo dadaallo nabadeed oo halkaasi ka socda. [Akhris …]
Xaradhere, Aug 09 – Xaaladda degmada Xaradheere oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa maanta iyo illaa shaalay galinkii danbaba deggan kadib markii halkasi ka dhaceen dagaallo ay dad ku dhinteen kuwo kalana ay ku dhaawacmeen labadii maalmood ee ugu danbeeyey.
Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ay idaacadda Daljir xiriir la samaysay, ayaa sheegay maanta xaaladda degmadaasi in ay tahay mid aad u xasiloon oo aysan ka jirin wax iska hor imaado ah.
Labo maalmood oo is xigay ayaa degmadaasi waxaa ka dhacay dagaallo xooggan oo u dhaxeeyey labo beelood oo wada dega deegaannada u dhaxeeyey Xaradheere iyo Cadaado, dagaalladaas oo salka ku hayey muran xagga deegaanka ah gaar ahaan waddo isku xirta deegaannada Xaradheere iyo Cadaado oo beelaha qaar damacsanaayeen in la sameeyey halka kuwo kalana ay diidanaayeen.
In ka badan 13 qof ayaa ku dhintay dagaalladii degmada Xaradheere, waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo intaasi ka badan sida ay noosheegeen odayaasha hadda ku howllan waan-waantu.
Odayaasha deegaanka oo u guntaday in ay xiisaddaasi qaboojiyaan ayaa ku guulaystay in xabadda la joojiyo iska markaana la kala qaado labadii melleyshiyo ee dirirtu u dhaxaysay.
Maanta ayaa waxaa bilowday wada hadallo hor dhac ah oo aan aad u weynayn, laakiin lagu damacsanyahay in xiisadda lagu soo afjaro.